सरस्वतीको ‘नथिया’ - पुस्तक - साप्ताहिक
कवितामा आफ्नो दरिलो छाप छोड्न सफल सरस्वती प्रतिक्षा अब आख्यानकार भएकी छिन् । उनले बादी समुदायको कथा माथि उनले लेखेको उपन्यास ‘नथिया’ सार्वजनिक भएको छ । शनिबार राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा उनको उपन्यास ‘नथिया’ प्रदेश नं. ७ की सांसद एवं बादी अभियन्ता उमा बादीले लोर्कापण गरिन । उमा बादीको नेतृत्वमा भएको एक आन्दोलनबाट लेख्न हौसिएकी सरस्वतीले लेखेको उपन्यासलाई उनले आफ्नो समुदायको कथा–व्यथा र संघर्षको इतिहास भनेकी छिन् ।
उपन्यास सार्वजनिक कार्यक्रममा चलचित्र निर्देशक दीपेन्द्र के खनालले नथिया माथि चलचित्र निर्माण गर्ने घोषणा गरे । ‘डीएस डिजिटल’ र ‘भूपेन्द्र खड्का प्रोडक्सन’ ले सरस्वतीको पहिलो उपन्यास ‘नथिया’ माथि चलचित्र बनाउने भएको हो ।
नथिया विमोचन कार्यक्रममा आख्यानकार एवं सञ्चारकर्मी नारायण वाग्लेले उपन्यास पुरुष–सत्ताका लागि रिस उठाउने खालको रहेको बताए । उनले ‘नथिया’ले समाजमा महिला के एउटा शरीर मात्र हो ? भन्ने प्रश्न गर्न बाध्य गराउने दाबी गर्दै भने, ‘उपन्यासले महिलाप्रति सिम्प्याथीभन्दा पनि इम्प्याथी बढाउँछ ।’
दस वर्षको तयारीपछि उपन्यास तयार भएको जनाउँदै नथियामा २०३५ सालदेखि २०४७ सालसम्मको बादी समुदायको कथा समेटिएको सरस्वतीले बताएकी छिन् ।
सरस्वतीको रक तीज गीतको भिडियो सार्वजनिक
रियोमा नेपाली खेलाडी
सरस्वतीको साधना गर्नुहोस्, लक्ष्मी पछिपछि आउँछिन्